सिके राउत « Janata Samachar
Tag: सिके राउत
सिकेको ‘यु टर्न’लाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘सम सम समन’ को ओली नीति भनेर खुट्याएका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले त्यसप्रति कटाक्ष गर्दै होमियोेप्याथिक चिकित्सा सूत्र अनुसार मधेसमा ओलीले दर्रो प्रतिस्पर्धी पठाइदिएको
‘सहमति विपरीत गए सिके राउतलाई पनि प्रतिबन्ध’
धनुषा । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले सिके राउतले सहमति विपरीत कार्य गरे विप्लव जस्तै प्रतिवन्ध गरिने बताउनुभएकाे छ । जनकपुरधामस्थित दुधमती पुलको शुक्रवार शिलान्यास गर्दै मन्त्री महासेठले
‘विप्लवलाई वार्ताबाटै सहमतिमा ल्याउनुपर्छ’
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सिके राउतसँगको सहमति स्पष्ट पार्न माग गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राउतसँग भएको ११ बुँदे सहमतिबारे सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएकाे छ
देशभक्त ‘विप्लव’माथि प्रतिबन्ध, सिके राउतलाई अंगालो ? – रेखा थापा
काठमाडौं । नेतृ तथा नायिका रेखा थापाले विप्लव समुहमाथि लगाइएको प्रतिबन्धमाथि असन्तुष्टि जनाएकी छन् । सरकारले देशभक्त ‘विप्लव’माथि प्रतिबन्ध लगाइ सिके राउतलाई अंगालो हालेर जनता तर्साउन खोजेको हो ? भन्दै
मन्त्रीलाई सीके राउत समर्थकको यस्तो चेतावनी
जनकपुधाम । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई डा. सीके राउतका समर्थकले कडा चेतावनी दिएका छन् । राउतका समर्थक ऋषि राजले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत मन्त्री यादवलाई
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) ले सरकारलाई राष्ट्र–बिखण्डनकारीप्रति सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । मालेको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्र–विखण्डनकारी गतिविधिमा लागेको सिके राउत समूहलाई शान्तिपूर्ण क्रियाकलापमा ल्याउनु सकारात्मक रहेको
‘देश मेरो होइन भन्नेलाई गोली हान्नुपर्छ’
काठमाडौं । हास्यकलाकार दीपकाराज गिरी समसामयिक विषयमा बोलिरहने कलाकार व्यक्ति हुन् । समसामयिक विषयमा आफ्ना भनाइ सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिब्यक्त गर्दा उनी कतिपय अवस्थामा विवादमा पनि तानिएका छन् । विवादित विषयहरुमा
‘सिके राउतसँगको सहमति सकारात्मक, बुँदा स्पष्ट भएनन्’
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमति मुलुकको हितमा भएतापनि सम्झौताका बुँदामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । जनमतसंग्रहमा सरकारले गरेको सहमति मुलुकको हितमा
काठमाडौं । गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसंग जनमत संग्रह गर्ने सहमति नभएको बताउनु भएकाे छ । गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा तराईलाई अलग गरि स्वतन्त्र मधेस निर्माण गर्ने
‘सरकार र सिके राउत सहमति सकारात्मक’
म्याग्दी । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले सिके राउतसँग गरेको सहमति सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । ‘देशलाई विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने समूहलाई मुलुकको अखण्डतालाई स्वीकार गरी शान्तिपूर्ण बाटोबाट